श्रीमानले याै’नसम्बन्ध नराखेपछि आत्मह’त्या गरेकी डा. प्रियाको त्यो सुसा*इड नोट, जसले संसारलाई रूवायो… – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमानले याै’नसम्बन्ध नराखेपछि आत्मह’त्या गरेकी डा. प्रियाको त्यो सुसा*इड नोट, जसले संसारलाई रूवायो…
2,3582minutes read
मृ*त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सु’साइड नो’टले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा अाएकाे हाे । नया दिल्ली, आफ्नो श्रीमान समलि’ङ्गी भएपछि अल इन्डिया मेडिकल इन्सिच्युट (एम्स) की डाक्टर प्रिया वेदीले सुसा’इड नोट लेख्दै आत्मह*त्या गरेको घटनाले संसारभर चर्चा पायो।
हृदयविरक सुसा*इट नोट लेख्दै डाक्टरले आफ्नो प्राण त्या’गेकी उनको पि’डाले संसारलाइ रूवायो । विवाहपछि सजाएका सपना सबै भताभुङ भएपछि जीवन मरुभूमिमा परिणत भएको भन्दै आत्म*ह*त्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मृ*त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसा*इड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहिरह्यो ।
विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शा’रीरिक सम्ब’न्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?
उनले फेसबुकमा लेखेको सुसा’इड नोट नोट यस्तो थियो हेल्लो,म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि डा. कमल वेदीसँग दाम्पत्य जीवन बिताइरहेकी छु । दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण अंश शा*रीरिक सम्बन्ध यो अवधिमा हामीबिच कहिल्यै भएन । विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शा’रीरिक सम्बन्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?’
मेरो इमेल कसैले ह्या’क गरिदिएको छ ।’ मनमा शंका राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे ।
एकदिन मैले फे’क इमेल आइडी भेट्टाएँ, जसको माध्यमबाट मेरा श्रीमान् समलिं*गीहरुसँग कुरा गर्थे, पो*र्न साइटहरु हेर्न गर्थे । यो इमेलमा रहेका सबै म्यासेज हामीले विवाह गर्नु पहिलेका थिए । जब मैले यसबारे श्रीमान्सँग कुरा राखेँ । उनले भने, ‘मेरो इमेल कसैले ह्या’क गरिदिएको छ ।’ मनमा शं’का राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे । मैले यो कुरा कसैलाई बताउन सकिनँ, किनभने म उनीसँग प्रेम गर्थेँ । लाग्थ्यो, एकदिन सबै ठिक हुन्छ ।
परिस्थिति यतिमैँ सिमित रहेन । बरु उल्टै उनले मेरो परिवार र ममा खो*ट रहेको आ*रोप लगाउन सुरु गरे । मलाई मा’नसिक रुपमा प्रता’डित गर्दै जान थाले । म चाहिँ उनकी श्रीमतीका रुपमा आफूलाई उभ्याएर हरेक कुरा सहन थालेँ । उनले सानातिना कुरामा पनि मलाई निकै दुःख दिए ।
करिब एकमहिना पहिले उनले भनेका थिए, म समलिं’गी हुँ वा बाइसेक्सुअल हुँ । म विश्वस्त छु, उनी समलिं’गी थिए किनकी मसँग रहँदा उनमा कहिल्यै उत्तेजना भएन । उनी आफ्नो पुरुष साथीसँग भने यौ*नको भरपुर आनन्द उठाउन सक्थे । काश्मिरमा रहेका उनका यौ*न पार्टनर फे’क इमेल आइडीबाटै उनीसँग जोडिएका थिए ।
म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु । तर, तिमीले मेरा सारा खुशी निमोठिदियौ ! तिमी सै*तान हौ, जसले मेरो जीवन ब-*र्बाद बनायो । हाम्रो समाजमा अरु पनि कोही यस्तै छौ भने प्लिज केटीसँग विवाह नगर्नू ।
म श्रीमतीका रुपमा त्यो समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन मद्दत गर्न चाहन्थेँ । तर, उनले भने मलाई सताइरहे । गएको रात मेरा लागि यति भया’बह भयो कि, मैले निर्णय गरेँ अब उनीसँग जीवन जिउन सक्दिनँ ।
अन्तमा डा. वेदी म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु । तर, तिमीले मेरा सारा खुशी निमोठिदियौ ! तिमी सैतान हौ, जसले मेरो जीवन ब*र्बाद बनायो । हाम्रो समाजमा अरु पनि कोही यस्तै छौ भने प्लिज केटीसँग विवाह नगर्नू । कोही समलिं*गी यस्तो गर्छ भने ऊ त्यो केटीको मात्रै होइन, घरपरिवार र आफन्तको भावनामाथि पनि खेलबाड हो ।
डा. बेदी मैले तिमीबाट केही चाहिनँ । केही चाहेकी भए पाँच वर्ष तिमीसँग हुन्नथेँ । यत्ति चाहेकी थिएँ, तिमीसँगै रहन । किन थाहा छ, म तिमीलाई हदभन्दा धेरै माया गर्थेँ । तिमी यस्तो कुरा कहिल्यै महशुस गर्न सक्दैनौ, किनकि तिमी त अप*राधी हौ । प्रियाले दिल्लीको एक होटलमा आराम गर्ने भन्दै पंखामा झु*ण्डिएर आत्मह*त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
छोरी जन्माउने आमालाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण
भदौ १ गतेदेखि पुनः उद्धार उडान हुने
यी उपाय उच्च रक्तचापमा औषधिको विकल्प बन्न सक्छ– डा अनिल
दलालबाट कुटिएका नेपालीलाई साथ दिदा एनआरएनए युएईका अध्यक्ष एनए बाट निलम्बित
झापामा समुदायमै कोरोना फैलिएपछि आजदेखि लकडाउन